डोनाल्ड ट्रम्पले गरिदिए अनौठो घोषणा, विश्वभरका नेताहरु सबै चकित, के भने त्यस्तो ? — Imandarmedia.com
डोनाल्ड ट्रम्पले गरिदिए अनौठो घोषणा, विश्वभरका नेताहरु सबै चकित, के भने त्यस्तो ?
काठमाडौं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायती प्रसारक पियर्स मोर्गनलाई अमेरिकाको कमाण्ड अझै पनि आफूसँग रहेको बताएका छन्। ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपतिले ‘एन’ शब्द अर्थात न्युक्लियर शब्द फेरि कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न नसक्ने बताएका छन्।
ट्रम्पले भने, पुटिनले सधैं परमाणु शब्द प्रयोग गर्छन्। यसमा सबै डराउँछन्। पुटिनले यसलाई बारम्बार प्रयोग गर्छन् जब मानिसहरू डराउँछन्। त्यही भएर उनले अहिले यस्तो गरिरहेका छन्। ट्रम्पको यो अन्तर्वार्ता हिजो प्रसारण भएको छ।
पुटिनले पश्चिमलाई कहिल्यै पनि आणविक हतियारको धम्की दिएका छैनन् । तर फेब्रुअरीमा जब उनले युक्रेनमा सैन्य कारबाहीको घोषणा गरे, उनले भने कि यदि कसैले उनको बाटोमा आउन खोज्यो भने यसको परिणाम “धेरै नराम्रो” हुनेछ।
र यस्तो इतिहासमा कहिल्यै भएको छैन। ट्रम्पले मोर्गनलाई भने कि उनले अमेरिकालाई आणविक खतराबाट बाहिर निकाल्नेछन्। ट्रम्पले भने, हामीसँग उनीभन्दा धेरै हतियार छन्। हामी उनीहरूभन्दा शक्तिशाली छौं।
तपाईंले यो शब्द फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। ट्रम्पले भने, तपाई फेरि परमाणु शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईले यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई समस्या हुनेछ। तर, युक्रेन संकटमा ट्रम्पको भनाइमा एकरुपता छैन।
ट्रम्पले कहिले वार्ताकि कुरा गर्छन् र कहिले परमाणु मिसाइलको धम्की दिइरहेका छन्। यसअघि फेब्रुअरीमा ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेनमा सेना पठाउने आदेशलाई ‘प्रतिभाशाली’ भनेका थिए।
ट्रम्पलाई एक रेडियो कार्यक्रममा ट्रम्पले युक्रेनमा सेना पठाएको विषयमा राष्ट्रपति बाइडेनको प्रतिक्रियाको बारेमा सोधिएको थियो।
त्यस्तै,अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्धितीयले राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेघन मर्केलको शाही उपाधि खोस्नुपर्ने बताएका छन्।
एक अन्तर्वातामा ड्युक र डचेज अफ ससेक्समाथि पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प खनिएका हुन्। राजकुमार ह्यारी आफ्नो देशप्रति निकै बेइमान भएकोसमेत उनले आरोप लगाए।
उनलाई स्वदेश फर्किन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताउँदै ट्रम्पले महारानीले ‘सीधै यहाँ नआउ भन्नु पर्ने’ बताए। रानीको स्थानमा ट्रम्प भएको भए के उनले ह्यारी र मेघनको शाही उपाधि खोस्थे रु भन्ने एउटा प्रश्नको जबाफमा ट्रम्पले अगाडि भने,‘हो मैले खोस्थे।
आफू मेघनको प्रशंसक नभएको भन्दै उनले अगाडि भने, बिचरा ह्यारीलाई उनको नाकले घेरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले राजकुमार ह्यारीको मेघनसँगको विवाहको खराब अन्त्य’ हुनेसमेत भविष्यवाणी गरे।
ड्युक अफ ससेक्स हात र घुडाँ टेकेर शाही जीवनमा फर्किन सक्ने उनले बताए।